လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 39
အရှင်ပညာနန္ဒ၊ သြဂုတ် ၂၊ ၂၀၁၂ ဆရာတော်ကြီးနှင့်ထောင်တွင်းအခြေအနေ ထောင်ထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဆရာတော်ကြီး တပါးကတော့ မဂ္ဂင်ဆရာတော် ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တော်(၇၀)ကျော်၊ ထောင်ရှစ်နှစ် ကျခံနေရသူပါ။ ဆရာတော်ဟာ နိုင်ငံအတော်များများ ရောက်ဖူးပြီး ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး တတ်ကျွမ်းတော်မူပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘီအေ ဘွဲ့ ယူခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကျောင်းတက်တုန်းကျနော်တို့ မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ ကမ္ဘာကျော် အိန္ဒိယစာရေးဆရာကြီး ရာဟုလာသံကိစ္စည်းနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဟုလာသံကိစ္စည်းအကြောင်းတွေ ပြန်ပြောပြတာ ကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားစရာကြီးပါ။ ဆရာတော်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ တိဘက်ကို ကုန်းကြောင်းလျှောက်ပြီးတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနှစ်အတော်ကြာ လေ့လာခဲ့ပါသေးတယ်။ထောင်ထဲ ရောက်နေချိန်မှာ ကျောင်းသားတွေ ချဉ်ခြင်း အတက်ဆုံးက စာသင်ချင်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်ထောင်က စာဖတ်ခွင့် မပေးတော့ သမိုင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ အင်္ဂလိပ်စာ စတဲ့...
ရွှေည၀ါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ အထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းနှင့် ဖြစ်စဉ်များဘလော့ဂ် မှ ကောက်နုတ်သည်။ မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၂ http://shwenyawa.blogspot.com မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ရွှေည၀ါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ၏ ထေရုပတ္တိအကျဉ်း ဘွဲ့တော် – အရှင်ပညာသီဟ သက်တော် – ၄၇ နှစ် သိက္ခာတော် (၀ါတော်) – ၂၇ ၀ါ မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၃၂၇ (ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၆၅ ခုနှစ်) မွေးဖွားရာဇာတိ – မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဒါး ဂွေးကုန်းအုပ်စု၊ ဘုရားကုန်း ကျေးရွာ။ ခမည်းတော်၊ မယ်တော် – ဦးထွန်းရင်၊ (ဒေါ်လှတုတ်) သာသနာဝင်အမှတ် –...
ဆရာမသန်းမြင့်အောင်နဲ့ ဆည်းဆာရိပ်မြင်ကွင်း မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂ စာရေးဆရာမ၊ လူမှုရေးနိုးကြားလှုပ်ရှားသူ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းနဲ့ အခြား ပရဟိတအသင်းများ၏ ဦးဆောင် ဦးရွက် စွမ်းဆောင်သူ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်နဲ့ သူဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဆည်းဆာရိပ် ခိုကိုးရာမဲ့ဘိုးဘွားများ ရိပ်သာ မြင်ကွင်းကို သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ ဆည်းဆာရိပ်၏ အေးမြသောအရိပ် တိုတောင်းလှတဲ့ လူ့ဘ၀သက်တမ်းမှာ လူသားချင်း စာနာထောက်ထား ချစ်ခင် စောင့်ရှောက်မှုတွေ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အမုန်းကြောင့်ဖြစ်သော စစ်ပွဲများ ပဋိပက္ခမီးများကို ငြိမ်းသတ်ကြပါစုို့လို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ဆည်းဆာရိပ်ကို ဖေစ့်ဘွတ်က သည်နေရာမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဆရာမ သန်းမြင့်အောင်၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုလည်း ပူးတွဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ...
စာရေးဆရာကြီး သံအမတ်ကြီး ဦးသက်ထွန်းကွယ်လွန်ခြင်း ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း ပြည်သူ့ခေတ်အပတ်စဉ်ဂျာနယ်၊ ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၊ ဒေါက်တာသန့်သော်ကောင်း (Myanmar Book Center)၊ ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္)၊ တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း နှင့် ဂျူနီယာဝင်း တို့၏ ၀မ်းနည်းခြင်း အမှတ်တရစကားများဖြင့် သံအမတ်ကြီး ဦးသက်ထွန်းကွယ်လွန်ခြင်း မှတ်တမ်းကို ယခုတပတ် ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် နောက်ဖုံးတွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရစဉ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး ဦးသက်ထွန်း (အသက် ၈၆ နှစ်) သည် ၅.၇.၂၀၁၂ ညပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ အာရှတော်ဝင်အထူး ကုဆေးခန်းတွင် ကွယ်လွန်သွား သည်။ ““ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ည ၇ နာရီ ၅၀ လောက်က အာရှတော်ဝင် ကြပ်မတ်ဆောင်မှာ ဆုံးသွားပါ တယ်၊ ဆရာကြီးက ပရက်ရှာ (သွေးပေါင်)လည်း ကျတယ်၊ ဆီး ချိုလည်း တက်တယ်၊ အကောင်း ကြီးကနေ ထဖြစ်သွားတာပါ၊ သင်္ဂြိုဟ်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့ မသတ်မှတ်ရသေးပါဘူး”” ဟု ဦးသက်ထွန်း၏ သားတပည့်တစ် ဦးဖြစ်သူကိုခန့်ချောမောင်ထံမှ သိရသည်။ဦးသက်ထွန်း၏ ရုပ်ကလာပ် ကို ထိန်ပင်သုဿာန်သို့ပို့ဆောင် ထားကြောင်း၊ ဈာပနအခမ်းအနား အစီအစဉ်ကိုမူ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန် မြို့တွင်နေထိုင်သည့်သားအကြီး ဖြစ်သူရောက်ရှိလာမှစီစဉ်မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၏ အတိုင်ပင်ခံ...
အရှင်ပညာနန္ဒ ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၂ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က မြန်မာပြည်မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း လူဦးရေနှစ်သန်းနီးပါး ရေဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရပြီး အစားအသောက် ကျန်းမာရေး နေထိုင်ရေး စတဲ့ကိစ္စတွေ အတော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာ လူတိုင်းအသိပါ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
အရှင်ပညာနန္ဒ ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၂ ဘွဲ့ အမည် – အရှင်ဥက္ကံသ မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၉၈၀ နေရပ် – မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မုဒွန်းကျေးရွာ အဖမ်းခံရသည့်နေ့ - ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၀ ပုဒ်မ – ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၇/၂၀၊ ၃၃ (က)/၃၈ ချမှတ်ခံရသည်ထောင်ဒဏ် – ၁၅ နှစ်။ နေခဲ့ရသည့်ထောင် – အင်းစိန်ထောင်၊ ပုသိမ်ထောင် လွတ်ရက် – ဇန်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂ • အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများ (၁) မွန်အမျိုးသားကျောင်းတွင် (၁၉၉၉ မှ၂၀၀၁) အထိ ကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့။ (၂) Save the children...
ဇော်သစ် (Kachinland News သတင်းဌာန – တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ) မတ်လ ၂၅၊ ၂၀၁၂ အရပ်ရှည်ရှည် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း၊ နှစ်လိုဖွယ်ရာအပြုံးနှင့် ကင်မရာတခုခုကို အမြဲကိုင်ဆောင်ထားတတ်သူ၊ ဇာတ်ညွှန်း၊ ဇာတ်ဖွဲ့ တခုခုကို အမြဲတွေးတောစဉ်းစားနေတတ်သူ၊ ဇာတ်ကားရိုက်ခြင်းကို ဝါသနာထုံသူ ဆရာနော်မိန်းအား ၂ဝဝဝ ခုနှစ်၊ မတ်လ၌ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်၊ လူငယ်ဌာနမှကြီးမှူးကျင်းပသော လူငယ်ခေါင်းဆောင်အမြင်ဖွင့်သင်တန်း တစ်ခုတွင် စတင်သိကျွမ်းခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ပါသည်။ ဆရာနော်မိန်းအား လူချင်းမရင်းနှီးခင်ကတည်းကပင်၊ ဆရာရေးသားသောဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုလေ့လာ၍ လေးစားခင်မင်မိခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဆရာနော်မိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီး၌ရယူရန် ကျောင်းသူ/သားတိုင်း မက်မောသော ဦးချစ်မောင် ဆုကိုရရှိသူ အဖြစ်လည်း လေးစားအားကျမိခဲ့ပါသည်။ ဆရာနော်မိန်းသည် ရရှိသောမိမိအခွင့်အရေးထက် လူ့အတိုင်းအဝိုင်းအတွက် ပေးဆပ်မှုကို ပို၍အလေးတစားဆောင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်၌ ဓမ္မပညာကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သောကြောင့်...
အရှင်ပညာနန္ဒ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းကာလတုန်းက စစ်အဏာရှင်တွေရဲ့ လူမဆန်စွာဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ မြို့ နယ်သံဃနာယက ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆရာတော်ဦးကောဝိဒဟာ၂၀၁၁၊ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့ကမှ သရက်ထောင်ကနေ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော် ဟာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်လာခဲ့ပေမဲ့လည်း အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်တာကို No tags for this post. Related posts No related posts.